Iva saMwari—Tevedzera Kushandisa Kwake Simba Murudo | Swedera Pedyo
1. Musungo wei wakavanda unowira vanhu vasina kukwana nyore nyore?
“HAKUNA munhu anowana simba pakasava nomusungo usingaoneki.” Mashoko iwayo anyanduri womuzana remakore rechi19 anotaura pamusoro pengozi yakavandira: kushandiswa kwesimba zvisizvo. Zvinosiririsa kuti vanhu vanowanzowira mumusungo uyu nyore nyore. Zvechokwadi, munhoroondo yose yevanhu ‘munhu akatonga mumwe munhu zvinokuvadza.’ (Muparidzi 8:9) Kushandiswa kwesimba pasina rudo kwakakonzera kutambura kwevanhu kusingatauriki.
2, 3. (a) Chii chinofadza zvikuru pamusoro pokushandisa kwaJehovha simba? (b) Simba redu ringabatanidza chii, uye tinofanira kushandisa sei simba rose rakadaro?
2 Zvisinei, hazvishamisi here kuti Jehovha Mwari, uyo ane simba guru guru, haamboshandisi simba iroro zvisizvo? Sezvataona muzvitsauko zvapfuura, anoshandisa simba rake nguva dzose—ringava rokusika, rokuparadza, rokudzivirira, kana kuti rokudzorera—mukuwirirana nezvinangwa zvake zvorudo. Patinofunga nezvenzira yaanoshandisa nayo simba rake, tinonzwa tichida kuswedera pedyo naye. Izvozvo zvinogona kuzotikurudzirawo ‘kuva vatevedzeri vaMwari’ mukushandisa kwedu simba. (VaEfeso 5:1) Asi isu vanhuwo zvedu tine simba rei?
3 Yeuka kuti munhu akasikwa “nomufananidzo waMwari” uye akafanana naye. (Genesi 1:26, 27) Nokudaro, nesuwo tine simba—tinaro rakati kuti. Simba redu ringabatanidza kukwanisa kuita zvinhu, kushanda; kukwanisa kudzora vamwe kana kuti kuva nechiremera pamusoro pavo; simba rokuchinja vamwe, kunyanya vaya vanotida; simba chairo romuviri; kana kuti zvinhu zvenyama. NezvaJehovha, munyori wepisarema akati: “Kwamuri ndiko kune tsime roupenyu.” (Pisarema 36:9) Naizvozvo, nenzira yakananga kana kuti isina, Mwari ndiye tsime resimba rose zvaro repamutemo ratingava naro. Naizvozvo tinoda kurishandisa munzira dzinomufadza. Tingaita sei kudaro?
Rudo Ndirwo Runokosha
4, 5. (a) Ndechipi chinhu chinokosha pakushandisa simba nomazvo, uye muenzaniso waMwari pachake unoratidza sei izvi? (b) Rudo ruchatibatsira sei kushandisa simba redu nomazvo?
4 Chinhu chinokosha pakushandisa simba nomazvo rudo. Muenzaniso waMwari pachake hauratidzi izvi here? Yeuka kukurukurwa kwezvinhu zvina zviri muunhu hwaMwari—simba, ruramisiro, uchenjeri, uye rudo—muChitsauko 1. Pazvina izvi, ndechipi chinokurira zvimwe? Rudo. “Mwari rudo,” inodaro 1 Johani 4:8. Hungu, chinhu chikuru pana Jehovha rudo; runoonekwa mune zvaanoita zvose. Naizvozvo pose paanoratidza simba rake panotungamidzwa rudo uye pakupedzisira zvinonakira vanomuda.
5 Rudo ruchatibatsira kushandisa simba redu nomazvo. Pamusoro pazvo, Bhaibheri rinotiudza kuti rudo rune “mutsa” uye “haruzvitsvakiri zvarwo.” (1 VaKorinde 13:4, 5) Nokudaro, rudo haruzotibvumiri kuita nenzira yehasha kana kuti youtsinye kune avo vatine simba rakati pamusoro pavo. Asi, tichabata vamwe nechiremera toisa zvavanoda nemanzwire avo mberi kwezvedu.—VaFiripi 2:3, 4.
6, 7. (a) Kutya Mwari chii, uye nei kuchatibatsira kusashandisa simba zvisizvo? (b) Ipa muenzaniso unoratidza kuti kutya kugumbura Mwari kunowirirana sei nokuda Mwari.
6 Rudo rwakada kufanana nechimwezve chingatibatsira kusashandisa simba zvisizvo: kutya Mwari. Kunokosha sei? “Nokutya Jehovha vanhu vanobva pane zvakashata,” inodaro Zvirevo 16:6. Kushandisa simba zvisizvo zvechokwadi kuri pakati pezvakaipa izvo tinofanira kusiya. Kutya Mwari kuchatidzora pakubata zvisina kufanira vatine simba pamusoro pavo. Nei? Chimwe chinhu ndechokuti, tinoziva kuti tichazvidavirira kuna Mwari pamusoro pemabatire atinoita vanhu vakadaro. (Nehemia 5:1-7, 15) Asi kutya Mwari hakungogumiri ipapo. Mashoko omutauro wakatanga kushandiswa anoreva “kutya” anowanzoreva kuremekedza Mwari zvakadzama. Nokudaro Bhaibheri rinobatanidza kutya nokuda Mwari. (Dheuteronomio 10:12, 13) Kutya kwokuremekedza uku kunobatanidza kutya kugumbura Mwari—kwete nemhaka bedzi yokuti tinotya migumisiro yacho asi nemhaka yokuti tinomuda zvechokwadi.
7 Kuenzanisira: Funga nezvoukama hwakanaka huri pakati pomukomana muduku nababa vake. Mukomana wacho anonzwa kufarira kwoushamwari kworudo kwaanoitwa nababa vake. Asi mukomana wacho anozivawo zvinodiwa nababa vake kwaari, uye anoziva kuti baba vake vachamuranga kana akaita misikanzwa. Mukomana haagari achitya baba vake sevachamukuvadza. Pane kudaro, anoda baba vake chaizvo. Mukomana wacho anofarira kuita zvichaita kuti afarirwe nababa vake. Ndizvo zvazvakaitawo nokutya Mwari. Nemhaka yokuti tinoda Jehovha, Baba vedu vokudenga, tinotya kuita chero chinhu chingamuita kuti anzwe “shungu pamwoyo pake.” (Genesi 6:6) Asi, tinoda chaizvo kufadza mwoyo wake. (Zvirevo 27:11) Ndicho chikonzero nei tichida kushandisa simba redu zvakanaka. Ngationei kuti tingaita sei kudaro.
8. (a) Varume vane chiremera chei mumhuri, uye chinofanira kushandiswa sei? (b) Murume angaratidza sei kuti anokudza mudzimai wake?
8 Imbotanga kufunga nezvomumhuri. “Murume musoro womukadzi wake,” inodaro VaEfeso 5:23. Murume anofanira kushandisa sei chiremera chaakapiwa naMwari ichi? Bhaibheri rinoudza varume kuti garai nevadzimai venyu “nokuziva muchivakudza sezvamunoita mudziyo usina simba.” (1 Petro 3:7) Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “kudza” rinoreva “mutengo, kukosha, . . . kuremekedza.” Mamwe marudzi eshoko iri anoshandurwa kuti “zvipo” uye “kosha.” (Mabasa 28:10; 1 Petro 2:7) Murume anokudza mudzimai wake haazombomurovi; uyewo haamunyadzisi kana kuti kumuzvidza achimuita kuti anzwe sechinhu chisina basa. Asi, anoona kukosha kwake omubata noruremekedzo. Anoratidza nemashoko ake nezviito—vari voga uye pane vanhu—kuti mudzimai wake anokosha kwaari. (Zvirevo 31:28) Murume akadaro haangowani rudo nokuremekedzwa nomudzimai wake chete, asi zvinotokosha zvikuru, anofarirwa naMwari.
Varume nevadzimai vanoshandisa simba ravo zvakanaka nokubatana norudo noruremekedzo
9. (a) Vadzimai vane simba rei mumhuri? (b) Chii chingabatsira mudzimai kushandisa mano ake kutsigira murume wake, uye zvingaguma nei?
9 Vadzimai vanewo simba rakati kuti mumhuri. Bhaibheri rinotaura nezvevakadzi vanotya Mwari, vari pasi pomusoro unotarisira zvakanaka vakatora danho rokutanga kuti vakurudzire varume vavo mune zvakanaka kana kuti kuvabatsira kusakanganisa pakusarudza. (Genesi 21:9-12; 27:46–28:2) Mudzimai angave akangwara zvikuru kupfuura murume wake, kana kuti angave nemamwe mano ayo murume wake asina. Asi, anofanira “kuremekedza murume wake zvikuru” uye kuti a“zviise pasi” pake “sokunaShe.” (VaEfeso 5:22, 33) Kufunga nezvokufadza Mwari kunogona kubatsira mudzimai kushandisa mano ake kutsigira murume wake pane kumuzvidza kana kuti kuedza kumutonga. ‘Mukadzi akachenjera zvechokwadi’ kudaro, anoshandira pamwe nomurume wake kuti avake mhuri. Nokudaro anova norugare naMwari.—Zvirevo 14:1.
10. (a) Mwari akapa vabereki chiremera chei? (b) Shoko rokuti “chirango” rinorevei, uye chinofanira kupiwa sei? (Onawo mashoko omuzasi.)
10 Vabereki vanewo chiremera chavakapiwa naMwari. Bhaibheri rinorayira kuti: “Madzibaba, musatsamwisa vana venyu, asi rambai muchivarera mukuranga nomukutungamirira ndangariro kwaJehovha.” (VaEfeso 6:4) MuBhaibheri, shoko rokuti “chirango” rinogona kureva “kurera, kudzidzisa, murayiridzo.” Vana vanoda chirango; vanokura zvakanaka vachidzorwa nemirayiridzo yakajeka, nhungamiro, nemiganhu. Bhaibheri rinobatanidza chirango chakadaro, kana kuti murayiridzo, norudo. (Zvirevo 13:24) Naizvozvo, “shamhu yokurayirira” haifaniri kumboshandiswa zvisizvo—kuvhiringidza pfungwa, kana kukuvadza. * (Zvirevo 22:15; 29:15) Chirango chakaoma kana kuti chehasha chisina rudo kushandiswa zvisizvo kwechiremera chomubereki uye kunogona kuita kuti mwana aore mwoyo. (VaKorose 3:21) Ukuwo, chirango chiri pakati nepakati chinopiwa nenzira yakakodzera chinoratidza kuvana kuti vabereki vavo vanovada uye vane hanya kuti vari kuva vanhu vorudzii.
11. Vana vangashandisa sei simba ravo zvakanaka?
11 Zvakadini nevana? Vangashandisa simba ravo zvakanaka sei? “Majaya anokudzwa nokuda kwesimba rawo,” inodaro Zvirevo 20:29. Chokwadi hapana nzira iri nani yokuti vechiduku vashandise nayo simba ravo kupfuura mukushumira “Musiki” wedu. (Muparidzi 12:1) Vaduku vanofanira kuyeuka kuti zviito zvavo zvinogona kubata manzwire evabereki vavo. (Zvirevo 23:24, 25) Apo vana vanoteerera vabereki vavo vanotya Mwari uye votevera nzira yakarurama, vanofadza mwoyo yevabereki vavo. (VaEfeso 6:1) Mufambiro wakadai u“nofadza zvikuru munaShe.”—VaKorose 3:20.
12, 13. (a) Vakuru vanofanira kuona sei chiremera chavo muungano? (b) Ipa muenzaniso wokuti nei vakuru vachifanira kubata boka nounyoro.
12 Jehovha akagovera vatariri kuti vatungamirire muungano yechiKristu. (VaHebheru 13:17) Varume vanokwanisa ava vanofanira kushandisa chiremera chavo chavakapiwa naMwari kuti vabatsire boka kugara zvakanaka. Nzvimbo yavo inopa vakuru kodzero yokuremedza hama dzavo here? Kwete! Vakuru vanofanira kuona nzvimbo yavo muungano zviri pakati nepakati uye nokuzvininipisa. (1 Petro 5:2, 3) Bhaibheri rinoudza vatariri kuti: “Mufudze ungano yaMwari, yaakatenga neropa reMwanakomana wake.” (Mabasa 20:28) Ipapo ndipo pane chikonzero chakasimba chokubata mumwe nomumwe ari muboka nounyoro.
13 Tingapa muenzaniso uyu. Shamwari yapedyo inokukumbira kutarisira chimwe chinhu chayo chinokosha. Unoziva kuti shamwari yako yakabhadhara mari yakawanda kutenga chinhu chacho. Hawaizochibata nokungwarira here, uchinyatsochitarisira? Saizvozvowo, Mwari akapa vakuru basa rokutarisira chinhu chake chaanokoshesa zvechokwadi: ungano, iyo vanhu vari mairi vanofananidzwa nemakwai. (Johani 21:16, 17) Makwai aJehovha anokosha kwaari—anokosha zvikuru, zvokuti akaatenga neropa rinokosha roMwanakomana wake akaberekwa mumwe oga, Jesu Kristu. Hakuna mutengo unopfuura apa uyo Jehovha aigona kuripira nokuda kwemakwai ake. Vakuru vanozvininipisa vanoramba vachiyeuka izvozvo uye vanobata makwai aJehovha zvinokodzerana.
“Rurimi Rune Simba”
14. Rurimi rune simba rei?
14 “Rurimi rune simba pamusoro porufu noupenyu,” rinodaro Bhaibheri. (Zvirevo 18:21) Zvechokwadi, rurimi runogona kukuvadza zvikuru. Ndiani wedu asati ambonzwa kurwadza kwokutaura kwokusafunga kana kuti kwokuzvidza? Asi rurimi rune simbawo rokugadzirisa. “Rurimi rwowakachenjera runoporesa,” inodaro Zvirevo 12:18. Hungu, mashoko akanaka, anovaka angafanana nokuzora mafuta anonyevenutsa, anoporesa pamwoyo. Funga mimwe mienzaniso.
15, 16. Tingashandisa rurimi munzirai kukurudzira vamwe?
15 “Taurai nemweya yakaora mwoyo nenzira inonyaradza,” inokurudzira kudaro 1 VaTesaronika 5:14. Hungu, kunyange vashumiri vaJehovha vakatendeka dzimwe nguva vangatambura nokuora mwoyo. Tingabatsira sei vakadaro? Varumbidze nomwoyo wose uye taura zvaunovarumbidzira kuti uvabatsire kuona kukosha kwavo mumeso aJehovha. Verenga navo mashoko ane simba emagwaro eBhaibheri anoratidza kuti Jehovha ane hanya zvechokwadi uye anoda vane “mwoyo yakaputsika” uye “vane mweya yakapwanyika.” (Pisarema 34:18) Patinoshandisa simba rorurimi rwedu kunyaradza vamwe, tinoratidza kuti tiri kutevedzera Mwari wedu ane tsitsi, “anonyaradza vakasuruvara.”—2 VaKorinde 7:6.
16 Tinogona kushandisawo simba rorurimi rwedu kukurudzira vamwe vanoda kukurudzirwa zvikuru. Imwe hama yedu yechiKristu yakafirwa here? Mashoko okunzwira tsitsi anoratidza kuva nehanya kwedu nokushushikana anogona kunyaradza mwoyo uri kuchema. Pane hama kana hanzvadzi yakura inonzwa seisingadiwi here? Mashoko akanyatsofungwa anogona kuvimbisa vakwegura kuti vanokosheswa uye vanoongwa. Pane mumwe munhu ari kutambura nourwere husingarapiki here? Mashoko omutsa anotaurwa parunhare kana kuti nomunhu wacho chaiye anogona kuita zvakawanda kukurudzira anorwara. Musiki wedu anofanira kuva anofara kwazvo patinoshandisa simba redu rokutaura, kutaura mashoko “akanaka nokuda kwokuvaka”!—VaEfeso 4:29.
Kuparidza mashoko akanaka—nzira yakanakisisa yokushandisa simba redu
17. Munzirai inokosha umo tingashandisa rurimi rwedu kubatsira vamwe, uye nei tichifanira kuita kudaro?
17 Hapana imwe nzira yokushandisa nayo simba rorurimi inokosha kupfuura yokuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaMwari kune vamwe. “Munhu, wakafanirwa, usaramba kumuitira zvakanaka kana ruoko rwako ruchinge rune simba kuzviita,” inodaro Zvirevo 3:27. Tine chikwereti kune vamwe chokuvapa mashoko akanaka anoponesa upenyu. Zvingasava zvakanaka kuti tingochengeta shoko rokukurumidzira iro Jehovha akatipa nomutsa. (1 VaKorinde 9:16, 22) Asi Jehovha anotitarisira kuita basa iri zvakakura sei?
Kushumira Jehovha ‘Nesimba Redu Rose’
18. Jehovha anotarisirei kwatiri?
18 Kuda kwedu Jehovha kunotiita kuti tiite ushumiri hwedu hwechiKristu zvizere. Jehovha anotarisirei kwatiri panhau iyi? Chimwe chinhu icho isu tose tinogona kupa pasinei nokuti mamiriro edu ezvinhu akadini muupenyu ndechokuti: “Zvose zvamunoita, zvishandei nemweya wose sokuna Jehovha, kwete kuvanhu.” (VaKorose 3:23) Achitaura murayiro mukuru pane yose, Jesu akati: “Uye unofanira kuda Jehovha Mwari wako nemwoyo wako wose nemweya wako wose nepfungwa dzako dzose uye nesimba rako rose.” (Mako 12:30) Hungu, Jehovha anotarisira mumwe nomumwe wedu kumuda nokumushumira nenzira yomweya wose.
19, 20. (a) Sezvo mweya uchibatanidza mwoyo, pfungwa, nesimba, nei zvimwe izvi zvichitaurwawo pana Mako 12:30? (b) Zvinorevei kushumira Jehovha nomweya wose?
19 Zvinorevei kushumira Mwari nomweya wose? Mweya zvinoreva munhu wose akadaro, nepfungwa dzake nomuviri wake zvichishanda. Sezvo mweya uchibatanidza mwoyo, pfungwa nesimba, nei zvimwe izvi zvichitaurwa pana Mako 12:30? Funga muenzaniso. Munguva inotaurwa muBhaibheri, munhu aigona kuzvitengesa (mweya wake) ova muranda. Asi, muranda wacho aigona kusashandira tenzi wake nomwoyo wose; aigona kusashandisa simba rake rose kana kuti kufunga kwake kwose kuti aite zvido zvatenzi wake. (VaKorose 3:22) Nokudaro, Jesu sezviri pachena akataura zvimwe izvi kuitira kuti asimbise kuti hapana chatinofanira kurega kuita mubasa redu kuna Mwari. Kushumira Mwari nomweya wose kunoreva kuzvipa kwedu, tichishandisa simba redu zvizere mubasa rake.
20 Kushumira nomweya wose kunoreva kuti tose tinofanira kupedza nguva yakafanana nesimba rakafanana tiri muushumiri here? Izvozvo zvingasambobvira, nokuti mamiriro ezvinhu nemano anosiyana pamunhu nomunhu. Somuenzaniso, munhu wechiduku ane utano hwakanaka akasimba angakwanisa kupedza nguva yakawanda achiparidza kupfuura uya anenge ava hari yofanzirofa nokukwegura. Munhu asina kuroora akasununguka pamitoro yemhuri angakwanisa kuita zvakawanda kupfuura zvingaita anofanira kutarisira mhuri. Kana tine simba nemamiriro ezvinhu anotigonesa kuita zvakawanda muushumiri, tinofanira kuva tichionga zvikuru! Chokwadi, hatingambodi kuva nepfungwa yokungotsoropodza, tichizvienzanisa nevamwe panhau iyi. (VaRoma 14:10-12) Asi, tinoda kushandisa simba redu kukurudzira vamwe.
21. Ndeipi iri nzira yakanakisisa uye inokosha kupfuura dzose yokushandisa simba redu?
21 Jehovha akaratidza muenzaniso wakakwana mukushandisa simba rake zvakanaka. Tinoda kumutevedzera nepose patinogona napo sevanhu vasina kukwana. Tinogona kushandisa simba redu zvakanaka nokubata nechiremera avo vatine simba pamusoro pavo. Pamusoro pezvo, tinoda kuita nomweya wose basa rokuponesa upenyu iro Jehovha akatipa kuti tiite. (VaRoma 10:13, 14) Yeuka, Jehovha anofadzwa paunopa zvakanakisisa izvo iwe—mweya wako—unogona kupa. Mwoyo wako haukuiti kuti ude kuita zvose zvaunogona mukushumira Mwari anonzwisisa kudaro uye ane rudo here? Hapana nzira iri nani kana kuti inokosha kupfuura ipapo yokushandisa simba rako.
^ ndima 10 Munguva inotaurwa muBhaibheri, shoko rechiHebheru rokuti “shamhu” raireva rutanda kana kuti tsvimbo, yakafanana neyaishandiswa nomufudzi kutungamirira makwai ake. (Pisarema 23:4) Saizvozvo, “shamhu yokurayirira” yechiremera chomubereki inoratidza nhungamiro yorudo, kwete chirango chehasha kana kuti choutsinye.
Zvirevo 3:9, 10 ‘Zvinhu zvinokosha’ zvatinazvo ndezvipi, uye tingazvishandisa sei kukudza Jehovha?
Muparidzi 9:5-10 Nei uchifanira kushandisa simba rako zvino munzira iyo Mwari anotendera?
Mabasa 8:9-24 Kushandiswai kwesimba zvisizvo kwakanyorwa pano, uye tinganzvenga sei kukurirwa nokukanganisa kwakadaro?
Mabasa 20:29-38 Vari munzvimbo dzokutarisira muungano vangadzidzei pamuenzaniso waPauro?